gaabinta : ZU
aasaasay : 1998
Ha iloobin in aad discuss Zayed University
University Zayed waa hogaamiye qaran iyo gobol ee hal-abuurka waxbarasho. aasaasay sannadkii 1998 iyo kibir sita magaca Founder of Nation - dabayaaqadii Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan ah, hay'ad flagship waxa uu la kulmay Madaxweynaha ee la filayo sare. maanta, University Zayed leeyahay laba xarumood oo casri ah ee Dubai iyo Abu Dhabi in soo dhaweyn labada ardayda qaranka iyo kuwa caalamiga ah.
University Zayed noqon doonaa jaamacad ugu horeeysa ee Imaaraadka Carabta oo la aqoonsan yahay caalamka ay ka qayb guulaha waxbarasho iyo dhaqanka iyo kobcinta horumarka dhaqaale iyo bulsho.
University Zayed diyaarin doonaa qalin qalma kuwaas oo ay awoodaan in ay ka qayb qaataan dhismaha quruunta dhex bixiya takhasuso iyo barnaamijyo waxbarasho oo u dhigma heerka caalamiga ah iyo iyada oo la siinayo jawi waxbarasho oo fiican in la xoojiyo doorka jaamacadda sida hoggaamiye ee horumarka cilmi sayniska iyo adeega bulshada.
ardayda A iskaashiga bulshada Educational halkaas, faculty and staff work together in pursuit of research and knowledge.
Attention in anshaxa xirfadeed by hoggaansanaayeen heerka ugu sareeya ee anshaxa shakhsiyeed, oo ku salaysan ixtiraam, daacadnimo, dhexdhexaadnimada, xisaabtanka iyo hufnaanta ku dhaqanka iyo anshaxa.
Innovation dhex korsashada iyo horumarka ka mid ah dhaqanka caalamka ugu sareeya ee cilmiga, barashada iyo cilmi-baarista.
Wadashaqayn iyo iskaashiga si loo hubiyo in guusha ee howlgalka University Zayed iyo ujeeddooyinka istiraatiiji ah oo leh hufnaan ugu badnaan iyo waxtarka.
Hoggaanka ku salaysan heer sare maamulka iyo xiriir joogta ah mida dhammaan saamileeyda University iyo furfurnaanta in dhaqamada kale, qabashada kac oo iyaga la wanaagsan, labadaba gudaha iyo dibadda beesha jaamacadda
In la dhiso jawi waxbarasho goynta-qarkiisa ah si ay u dardar-abuurka iyo ikhtiraaca.
Diyaari qalin qalma kuwaas oo ay awoodaan in ay ka qayb qaataan geedi socodka horumarinta, iyo kuwa wax soo saar leh in umadooda, awood leh xirfadaha fekerka muhiimka, oo u furan adduunka ku wareegsan.
Samatabbixi waxbarasho tayo sare leh in diiradda saarayaa ardayda kobciya’ aqoonta iyo xirfadaha.
Hagaaji heer cilmi University ee.
Hubi bixinta dhammaan adeegyada maamulka waafaqsan tayo leh, hufnaan iyo hufnaan siyaasadaha.
Faafiyo dhaqanka ah hal-abuurnimo gudahood ururka
Technology & Waxbarasho
Technology Information (Security & Network Tech)
Technology Information (Enterprise Computing)
xisaabta & Statistics
Ma rabtaa discuss Zayed University ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista